Soo dejisan Puffin Browser 7.8.2.612 – Windows – Vessoft
WindowsInternetkaDareemaha WebkaPuffin Browser
Bogga rasmiga ah: Puffin Browser
Puffin Browser – shabakad degdeg ah oo cusub oo leh tiknoolajiyad gaar ah si degdeg ah loogu dhejiyo bogagga shabakadda. Software wuxuu u dirayaa dhamaan codsiyada isticmaalaha in ay u adeegaan fogeyaasha server-yada ah iyada oo loo marayo dariiqa loogu talagalay horudhaca iyo isku-dhejinta bogagga shabakadda, taas oo ah, waxay u oggolaaneysaa in ay galaan goobta lagama maarmaanka ah sida caadiga ah. Puffin Browser wuxuu siiyaa shabakad nabadgelyo leh oo internetka ah, sababtoo ah xogta laguma gudbiyo qalabka isticmaalaha oo ay ku duuban yihiin server-yo fog. Software waxay taageertaa qaabka khafiifka ah waxayna leedahay qalabyo lagu abaabulo jaantusyada, maaraynta taariikhda iyo soo-celinta, qalabka mashiinka raadinta, nadiifinta xogta webka, iwm. Puffin Browser waxay leedahay interface interface oo burburisa ilaha nidaamka yar ee suurtogalka ah.
Xawaaraha sare ee bogga bogga
Isticmaalida isticmaalka Wi-Fi-ga dadweynaha
Soo dejisan Puffin Browser
Faallo ku saabsan Puffin Browser
Puffin Browser Xirfadaha la xiriira
Macmiilka rasmi ah u la shaqeeya shabakadaha ugu caansan ee bulshada. Software waxay leedahay weyn oo qalab loogu talagalay maamulka shabakadda oo ku habboon in macluumaadka loo baahan yahay inay helaan.
Tani waa noocyada codsiyada iyo yutiilitiga si loo tijaabiyo, loo ogaado oo loo xaliyo dhibaatooyinka kombiyuutarka ee kala duwan.